Trano nalaina | Professor Poeta
Tianay ny trano satria, ankoatry ny hoe malalaka sy antitra (ny trano tranainy ankehitriny no resin’ny varotra tsara indrindra ny akany), dia tazomina ho fahatsiarovana ny raibe lehibe, ny raiben-dreny, ny ray aman-dreninay ary ny ankizy rehetra.
Efa nahazatra anay izahay sy Irene mba hitohizako irery ao, izay adala, satria tao amin’ity trano ity dia olona valo no afaka nipetraka fa tsy nandeha teny an-dalana. Nanao ny fanadiovana izahay ny maraina, nifoha tamin’ny fito ora, ary tamin’ny 11 ora teo ho eo, namela an’i Irene ny efitrano farany handehananay aho ary nankany amin’ny lakozia. Ny atoandro dia amin’ny mitatao vovonana, mandrakariva; satria tsy nisy na inona na inona natao afa-tsy ny lovia maloto vitsivitsy. Tianay ny misakafo hariva mieritreritra ny trano lalina sy mangina ary ny fomba nitondranay azy madio. Nihevitra mihitsy aza izahay indraindray hoe izy no tsy hamela anay hanambady. Noroahin’i Irene ny akanjo roa tsy nisy antony lehibe, dia namoy an’i Maria Esther aho taloha kelin’ny nifankahitanay. Niditra tao amin’ny fort izahay tamin’ny hevitra tsy voatanisa fa ny fanambadianay tsotra sy mangina an’ireo mpirahalahy dia ilaina ny fanakatonana ny tetirazana namboarin’ny raibe sy renibeny tao an-tranonay. Any isika dia ho faty any indray andro any, ny zanak’olo-mpiray tam-po izay kamo ary malemy paika hijanona ao an-trano ary handefa izany mba hampanan-karena azy io amin’ny tany sy ny biriky; na raha izany aza, dia hampidinintsika ao amin’ny fahitsiana avokoa isika, alohan’ny farany.
Irene dia zazavavy teraka mba tsy hanahirana olona. Ankoatra ny asany maraina, nandany ny andro nandondona teo amin’ny sofa tao amin’ny efitranony izy. Tsy fantatro hoe nahoana no nandohalika be aho, mieritreritra aho fa mandohalika ny vehivavy rehefa heverin’izy ireo fa zavatra tsy maintsy atao io asa io. Tsy toy izany i Irene, nandrotsahany zavatra ilaina, akanjo mafana, ririnina, kiraro ho ahy, shawl ary akanjo lava ho azy. Indraindray izy handondena vest ary hanala izany avy hatrany satria zavatra tsy tiany; mampihomehy ny mahita ao anaty harona izay antokon-volon’ondry curling manohitra ny fahaverezany ny endriny taloha. Ny sabotsy dia nandeha namaky ny volon’ondry aho; Natoky an’i Irene ny tsiriko tsara, nahafinaritra tamin’ny loko ary tsy voatery niverina tamin’ny lamosina intsony. Nanararaotra ireo dia ireo aho mba nandehandeha nanodidina ny fivarotam-boky, ary nanontany foana raha nisy ny vaovao frantsay literatiora. Hatramin’ny 1939 dia tsy nisy zava-tsoa tonga tao Arzantina. Fa ilay trano no tiako resahina, ny trano sy i Irene, satria tsy manana dikany aho. Manontany tena aho hoe inona no ho vitan’i Irene nefa tsy nisy daroka. Afaka mamerina mamaky boky ny olona iray, fa rehefa vita ny palitao dia tsy afaka averina tsy misy fanafintohinana. Indray andro aho nahita fotsifotsy fotsy, maitso, lilac, rakotra naphthalene, anaty mpaka sary ao anaty akanjo, nametaka toy ny tao anaty haberdashery; Tsy sahy nanontany azy aho hoe inona no nokasainy hatao. Tsy mila mikatsaka vola izahay, ny vola isam-bolana dia avy any an-tsaha, izay tsy mitsaha-mitombo hatrany. Fa ny kofehy tsy nahasarika an’i Irene ihany no nampiseho azy, nanam-pahafinaretana mahafinaritra izy ary nandany fotoana maro nijereny ny tanany toy ny volafotsy volafotsy, fanjaitra ho avy sy handeha, ary harona iray na roa eo amin’ny tany izay ahitana fikorianan’ny baolina hatrany. Tsara tarehy tsara izy io.
Ahoana ny tsy ahatsiarovako ny fizarana trano! Ny efitrano fisakafoana, efitrano fandraisam-bahiny miaraka amina gobelins, trano famakiam-boky ary efitrano lehibe telo dia any amin’ny faritra lavitra indrindra, ilay tsy manadino ny làlan’i Rodríguez Pena. Ny lalantsara iray misy ny varavarana mahogany be dia be mampisaraka ity ampahany amin’ny elatra eo anoloana ity izay misy efitra fandroana, lakozia, efitranony ary efitrano afovoany, izay nifandray tamin’ny efitrano sy ny lalantsara. Niditra tao anaty lalamby nogadra tao an-trano ny trano, ary ny vavahady mankamin’ny vavahady dia teo amin’ny fidirana amin’ny làlana. Niditra tao amin’ny lalantsara ny olona, ​​nanokatra ny vavahady ary niditra tao amin’ny efitrano; nisy làlana mankao amin’ny efitranontsika manodidina, ary ny anoloana dia nisy lalantsara izay mankany amin’ny sisiny farany; mandroso amin’ny lalantsara, miampita ny varavarana mahogany ary mijanona kely, manomboka ny lafiny hafa amin’ny trano, azonao atao koa ny mihodina miankavia mialoha ny varavarana ary manaraka ny lalamby tery izay mankany amin’ny lakozia sy ny trano fandroana. Rehefa nisokatra ny varavarana dia tsikaritry ny olona fa lehibe tokoa ilay trano; satria, raha ny mifanohitra amin’izany, nanome ny fahatsapana ho trano fonenana ho an’ireo izay maniry ankehitriny, zara raha afaka mifindra ianao; Izaho sy Irene dia niara-nipetraka tamin’iny faritra iny tao amin’ilay trano, saika tsy tonga tany ivelan’ny varavarana mahogany afa-tsy ny fanadiovana, satria tsy mahagaga raha ny vovoka no ampiana amin’ny vovoka. Buenos Aires dia mety ho tanàna madio; fa io dia fisaorana ny mponina ao fa tsy zavatra hafa. Misy vovoka be loatra eny amin’ny rivotra, zara raha mandeha ny rivotra ary efa tsapa ny vovoka amin’ny marbin’ny consoles sy eo anelanelan’ny felaka macrame; mitaky asa izy io mba hivoaka tsara miaraka amin’ilay duster, dia manidina izy ary ajanony vetivety mandritra ny fotoana fohy ary avy eo mametraka ny tenany indray amin’ny fanaka sy ny piano.
Hahatsiarovako azy mazava tsara foana satria tsotra be sady tsy misy ilàna azy io. Nandondom-baravarana tao anaty efitranony i Irene, tokony ho tamin’ny valo ora hariva, ary tampoka teo aho dia nanana ny hevitra fa hametraka ny kettle amin’ny afo. Nandeha tao amin’ny lalantsara aho mandra-pahatongako teo anoloan’ny varavaran’ny mahanioka ajar, ary nanao ny fihodinana izay nankany amin’ny lakozia raha nandre zavatra tao amin’ny efitrano fisakafoana na tranomboky aho. Tonga tao anaty ody sy marenina ilay feo, toy ny seza nilatsaka teo amin’ny karipetra na bitsiky ny resaka. Henoko koa, na tamin’ny fotoana iray na teo aorian’izay, midina tao amin’ilay lalantsara izay nidina avy tao amin’ireto efitrano ireto nankeo am-baravarana. Nianjera tamin’ny rindrina aho, raha vao tara, nokapohiko ilay izy, nanohana ny vatako; Soa ihany fa napetraka teo anilantsika ny lakilasy ary nampandreko ny lakile lehibe ho an’ny filaminana bebe kokoa aho.
Niditra tao an-dakozia aho, nandro ny kettle ary, rehefa niverina niaraka tamin’ny kamiao chimarrão aho, hoy aho tamin’i Irene:
– Tsy maintsy nanakatona ny vavahadin’ny lapa aho. Nentin’izy ireo ny ampahany aoriana.
Nidininy ny mandondona azy ary nijerijery ahy tamim-pitiavana sy vizana izy.
– Azonao antoka ve izany?
“Ka, hoy izy, nanangona ny fanjaitra” fa tsy maintsy miaina eto an-dàlana isika. “
Nanomana ny chimarrão tamim-pitandremana aho, saingy vetivety foana dia niverina ny asany. Tadidiko fa mandondona volon-doko izy; Tiako ity vest ity.
Ny andro voalohany dia toa maharary, satria samy nandao ny zavatra tiantsika maro izahay. Ireo boky momba ny literatiora frantsay, ohatra, dia tao amin’ny tranomboky rehetra. Nieritreritra momba ny tavoahangin’i Hesperidin i Irene taona maro lasa izay. Matetika (fa izao vao niseho vao tsy ela akory) dia hanakatona ny mpanao sary akanjo izahay ary nifampijery niaraka.
– Tsy ato.
Ary mbola zavatra iray hafa nanjavona tany an-dafy avy amin’ny trano koa izahay.
Na izany aza, nanana tombony vitsivitsy ihany koa izahay. Natsotra be ilay fanadiovana ka, na dia nitsangana be izahay taty aoriana, tamin’ny sivy sivy lasa teo, ohatra, talohan’ny 11 ora dia efa niforitra izahay. Efa zatra niara-nandeha tamiko tany an-dakozia i Irene mba hanampy ahy hanomana sakafo antoandro. Rehefa avy nieritreritra be izahay dia nanapa-kevitra hoe: raha mbola misakafo hariva aho, dia mahandro ny lovia i Irene mba hohanina amin’ny alina. Faly izahay satria tsy naninona ny namela ny efitra nandritra ny hariva mba nahandro. Izao dia efa ampy hametrahana ny latabatra ao amin’ny efitranon’i Irene sy ny lovia sakafo mangatsiaka.
Faly i Irene satria maro kokoa ny fotoana handohizana. Somary very aho noho ireo boky, saingy, mba tsy hampahatezitra ny rahavaviko, dia nanapa-kevitra aho ny hamerina hijery ny fanangonam-bolan’ny dadako, ary dia nahafaty ahy izany. Nahafinaritra anay ny tsirairay, samy nanana ny azy, saika niaraka tao amin’ny efitranon’i Irene, izay no tena ahazoana aina. Indraindray dia nilaza i Irene:
– Jereo eo aho tamin’io fotoana io. Toy ny sary fisarihana azy ihany ve izany?
Fotoana fohy taorian’izay dia izaho no nametraka taratasy kely teo anoloany mba hijery ny tsangan’ny hajia Eupen sy Malmédy. Tena nanao tsara izahay ary tsikelikely dia nanomboka tsy nieritreritra izahay. Afaka miaina tsy misy fieritreretana ny olona iray.
(Rehefa nanonofy mafy i Irene dia resin-tory aho. Tsy ho zatra ny feon’ilay sarivongana na boloky akory aho, feo avy amin’ny nofy fa tsy avy amin’ny tendany. Nilaza i Irene fa ny nofinofiko dia misy horohoron-tany lehibe izay indraindray nahatonga ny lamba firakotra. Ny efitranonay dia samy manana ny efitrano afovoany, fa amin’ny alina dia misy zavatra ao an-trano, maheno ny fifohana rivotra, ny kohaka, ny fahatsapana ny fihetsika izay nitondra ny tanana tamin’ny kofehy jiro, ny fifaninanana sy ny tsy fisian’ny insomnia.
Ambonin’izay dia nilamina tao an-trano ny zava-drehetra. Nandritra ny andro dia tsaho anatiny io, fikoropahana vita amin’ny fanjaitra vita amin’ny kofehy, vita an-tsokosoko rehefa nandalo ny sarin’ny firafitry philatelika. Ny varavarana mahogany, heveriko fa efa nolazaiko, fa goavana. Tao amin’ny lakozia sy ny efitra fandroana, izay niankina tamin’ny ampahany, dia niresaka tamin’ny feo mahery izahay na i Irene nihira lullabies. Ao an-dakozia, dia be ny feo be avy amin’ny lovia sy fitaratra ka mihetsika ny feo hafa ao. Tena tsy nampangina loatra ny fanginana, fa rehefa niverina tany amin’ny efitrano fatoriana izahay sy ny efitra fatoriana, dia nilamina ny trano ary milamina dia nandeha moramora izahay mba tsy hanelingelina anay. Mieritreritra aho fa izany indrindra, amin’ny alina, rehefa nanomboka nanonofy mafy i Irene, dia natory tsy ho ela aho.)
Saika hamerimberina zavatra mitovy ihany izany afa-tsy ny vokatr’izany. Mahatsiaro mangetaheta ny alina aho, ary alohan’ny hatory dia nilaza tamin’i Irene aho fa handeha any an-dakozia hantsaka rano aho. Avy amin’ny varavaran’ny efitrano fatoriany (mandondòna izy) dia nahare tabataba tao an-dakozia aho na angamba tao amin’ny efitrano fandroana, satria ny fantson’ny lakan’ny lalantsara dia nanako ny feo. Nahasarika ny fijanonana tampoka ny saiko tamin’i Irene, ary tonga teo anilako tsy nilaza na inona na inona. Nihaino ny feonay izahay, ary mazava fa tsapany fa eo an-danin’ny varavarana mahogany izy ireo, ao an-dakozia sy efitra fandroana, na eo amin’ny lalantsara izay nanombohan’ilay curve, saika teo akaikinay.
Tsy mifankahita akory isika. Notetehiko ny sandrin’i Irene ary nitazona ahy izy mandra-pandavaky ny varavarana, tsy niherika. Ny feo mafy dia nahenoana feo be sy mahery kokoa, na izany aza, eo an-damosinay. Notetehiko ny mihidy ny vavahady ary nijanona teo amin’ny lalambe izahay. Tsy nisy naheno izao.
“Nandray an’ity ampahany ity izy ireo”, hoy i Irene. Ny antsy nihantona tamin’ny tanany sy ny kofehy dia tonga teo am-bavahady ary very teo ambanin’ny varavarana. Vao nahita izy fa teo amin’ny ilany ny skeins dia nanala ny knitting izy fa tsy nijery azy.
– Ianao ve nanam-potoana haka zavatra? – Nanontany azy tsy misy antony aho.
– Tsia, tsy misy.
Nitafy ny akanjo izahay. Tadidiko fa dimy arivo sy iray alina ny ao amin’ny efi-tranon’ny efitra fatoriana. Tara loatra ny ankehitriny.
Mbola teo am-piambenana ny famantaranandro aho dia nahita fa iraika ambin’ny folo tamin’ny alina. Nampifandraisiko tamin’ny sandriko ny valahin’i Irene (heveriko fa mitomany izy) ary nandeha an-dalambe izahay. Talohan’ny nandehanako dia nanenina aho, nikatony ny varavarana fidirana ary nariako teo amin’ny sisin-dalana ny lakile. Raha devoly mahantra tsy manana eritreritra ny hangalatra sy hiditra an-trano, amin’ity ora ity ary amin’ny trano noraisina.
Zanaky ny rainy diplaoma, Julio Cortázar dia teraka tany Brussels, tamin’ny 1914. Tamin’ny taona efatra dia nandeha tany Argentina izy. Miaraka amin’ny fisarahan’ireo ray aman-dreniny dia nitaiza ny reniny, nenitoa sy renibeny, ilay mpanoratra. Miaraka amin’ny anaram-boninahitry ny profesora ara-dalàna amin’ny Letters, nanomboka ny fianarany tao amin’ny Faculty of Philosophy and Letters, izay tsy maintsy handao azy tsy ho ela izy, noho ny olana ara-bola. Mba ho velona dia nanome kilasy sy sekoly maromaro any afovoan’io firenena io izy. Raha tsy mifanaraka amin’ny jadona ankehitriny any Argentina izy, dia nifindra tany Paris tamin’ny 1951. Mpanoratra tantara fohy noheverina ho tonga lafatra indrindra amin’ny karazana, afaka mitanisa miaraka amin’ireo sangan’asany tena “Bestiary” (1951) isika, “Las armas secretas” (1951). 1959),), “Rayuela”, (1963), “Todos los fuegos el fuego” (1966), “Ultimo round” (1969), “Octaedro” (1974), “Pameos y Meopas” (1971) na i Glenda (1980), “Salvo el crepilight” – posthumous (1984) ary “Papers tsy ampoizina” – posthumous (2010). Ny mpanoratra dia maty tany Paris leukemia tamin’ny 1984.
Navoaka tamin’ny “Bestiario” tany am-boalohany ny lahatsoratra etsy ambony ary nalaina tao amin’ny boky “Contos Latino-Americanos Eternos”, Bom Texto Editora, Rio de Janeiro – 2005, p. 09, fandaminana sy fandikana nataon’i Alicia Ramal.